युवतीलाई आकर्षित बनाउने तरिका यस्तो ? - Online Sajha	Online Sajha
युवतीलाई आकर्षित बनाउने तरिका यस्तो ?
४. तपाईं कुनै युवतीलाई मन पराउनु हुन्छ भने लगातार उसको पछाडीमात्र नलाग्नुहोस् । उसलाई आफ्नो प्रेम दर्शाउन मायालाग्दो देखिने वा दुखी बन्ने काम भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यसको सट्टा तपाईं आफ्नो जीवनशैली यति आर्कषित र लोभलाग्दो बनाउनुहोस् कि युवती स्वतस् तपाईप्रति आकर्षित हुन सकुन् ।